Betsaka ny ny manontany manoloana ny fahafahan’ny vahoaka miverina any am-piangonana taorian’ny fanambaran’ny Filoham-pirenena farany naneho, fa manomboka miverina tsikelikely amin’ny fiainana andanandro isika, hoy ny Kardinaly Désiré Tsarahazana. Ho fanamafisana ny taratasy nalefa any amin’ny diosezy tsirairay sy araka ny tatitra sy toromarika avy amin’ny fitondram-panjakana mahefa, dia mitohy ny hamehana ara-pahasalamana, ary tsy azo atao ny famoriam-bahoaka mihoatra ny 50, mbola ao anatin’ny ady amin’ny fipariahan’ny valanaretina covid-19 isika amin’izao fotoana izao. Tohizana ny natao teo aloha, izany hoe mankalaza ny sorona masina ireo lohan’ny mpisorona, ary alefa amin’ny fitaovan-tserasera, araka ny fampitam-baovaon’io Lehiben’ny Fiangonana katolika eto Madagasikara io. Anjaran’ny Eveka isaky ny disoezy no manome toromarika araka ny zava-misy any amin’ny toerana tsirairay, ary tsy maintsy manaraka ny fepetra napetraky ny fanjakana, hoy ny Kardinaly Désiré Tsrahazana. Ho an’ny FLM kosa dia hitafa amin’ny mpanao gazety ny Rev Dr Rakotonirina David, filohan'ny FLM sady filohan'ny FFKM anio zoma 24 aprily amin'ny 10h30 ao amin'ny FLM 67 ha ka eo no ahitana na hitohy ny fikatonana na hisokatra amin'izay.